Bazozisola abazongicwasa: Balotelli | IOL Isolezwe
Bazozisola abazongicwasa: Balotelli
Isolezwe / 31 May 2012, 07:30am /
USABISA ngokukhipha isidumbu kwabamcwasa ngokwebala emqhudelwaneni we-EURO ka-2012 umgadli wase-Italy odume ngokungabi nakhanda, uMario Balotelli, odlalela iManchester City yase-England.
Umqhudelwano walo nyaka uzoqala ngoJuni 8. Uzosingathwa yiPoland ne-Ukraine kodwa ungcoliswe yimibiko engemihle yokucwaswa kwabamnyama ngokwebala esakazeke umhlaba wonke.
Lo mgadli wase-Italy kodwa omnyama ngokwebala futhi ohlale njalo esezindabeni ngezigemegeme zakhe uthe ozoke azame ukumphonsela ubhanana njengoba kubikwa kanjalo uyokube uzithintele ngoba kayikho into angayifuni njengabantu abona umdlalo webhola ngokucwasa abathile ngenxa yebala labo.
UBalotelli, okade ayezithola ekulesi simo, wethembise ukugadla kanzima futhi abulale kulaba abenza lokhu uma bekhona.
“Ngeke ngikwamukele lokhu. Uma bekwenza emgwaqweni ngizobahlasela kodwa uma bekwenza ngisenku-ndleni, ngizophuma ngibambe ibhanoyi lokuqala elibheke ekhaya,” kusho lo mdlali.
Useke wacwaswa ngokwebala edlalela u-Under 21 we-Italy ngo-2009 kanti uveze ukuthi kuzodingeka abe maningi amaphoyisa enkundleni ukuze agweme lokhu ngoba ngeke akumele ukwehliswa isithunzi ngabantu abangazi lutho ngebhola.
Kusemqoka ukuthi uBalotelli angagcini kuphela ngokubheka abacwasa abanye kwazise iqembu lakhe lesizwe liseqoqweni elinzima kakhulu.
Baqhathwe neCroatia ebophele uLuka Modric ogijima kuTottanham Hotspur yase-England, Republic of Ireland, eholwa wuRobbie Keane, naye oke wadlala kuSpurs, Liverpool neLA Galaxy yase-USA bese kuba khona nompetha balo mqhudelwano iSpain.
ISpain ibhekwe kakhulu kulo mqhudelwano kwazise iyona futhi engompetha bomhlaba futhi ibophele abadlali abasatshwa umhlaba wonke, okubalwa kubona u-Ike Casillas, Fernando Torres, Sergio Ramos, Xavi Hernandez, Andreas Iniesta nabanye abaningi.
Olunye ulwazi luthwathwe ku-Euro.com